‘हटस्पट’ बन्दै चितवन- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
‘हटस्पट’ बन्दै चितवन
तीन दिनमा २६ को मृत्यु, सघन उपचारमा १११ जना, अस्पताल आउने अधिकांशलाई अक्सिजन आवश्यक
वैशाख २५, २०७८ रमेशकुमार पौडेल
चितवन — कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने क्रम चितवनमा पनि चिन्ताजनक रूपमा उकालो लाग्न थालेको छ । यहाँका अस्पतालहरूमा उपचाररत संक्रमितमध्ये बुधबारयता मात्रै २६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । त्यसमध्ये चितवनका मात्रै ८ जना छन् । त्योभन्दा बढी रूपन्देहीका छन् । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार शुक्रबार दिउँसोसम्म जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या १ हजार ९ सय ७७ पुगेको छ ।
मध्य चैतयता जिल्लाभित्रै संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्दै गएको हो । यसबाहेक जिल्ला बाहिरबाट पनि धेरै संक्रमित आउने गरेका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख दीपक तिवारीका अनुसार हाल १७ जिल्लाका संक्रमित यहाँ उपचाररत छन् । शुक्रबार चितवनका सक्रिय संक्रमितमध्ये अस्पतालमा १ सय ४० जना छन् ।
अन्य होम आइसोलेसनमा छन् । भरतपुर अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज र पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार गराउनेको संख्या भने २ सय ७२ छ । झन्डै आधा बिरामी बाहिरी जिल्लाका छन् । ‘पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, धादिङबाट पहिलादेखि नै बिरामी यतै आउँथे । अहिले पनि आएका छन् । संक्रमण बढेसँगै रूपन्देही र पूर्वी तथा पश्चिम तराईका जिल्लाबाट पनि बिरामी आइरहेका छन्,’ तिवारीले भने ।
भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारी गत वर्ष अस्पताल आउने संक्रमितमध्ये २० प्रतिशतलाई मात्रै अक्सिजन दिनुपरेको बताउँछन् । यो पटक भर्ना भएका प्रायःलाई दिनुपरिरहेको उनले बताए । ‘अस्पताल आएका प्रायःलाई अक्सिजन दिनुपरेको छ । अक्सिजन दिँदादिँदै ४८ घण्टाभित्र आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामी पनि धेरै छन्,’ डा.अधिकारीले भने ।
शुक्रबार यहाँका अस्पतालका आईसीयूमा ६३ जना, भेन्टिलेटरमा ११ र एचडीयूमा ३७ जना छन् । बिरामीको चाप बढेको र बाहिरी जिल्लाबाट आउने बिरामी अन्तिम अवस्थामा आएका कारण पनि मृतकको संख्या बढ्न थालेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख तिवारीको आकलन छ । ‘३०/४० प्रतिशत बिरामी त आउँदै गम्भीर अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो,’ तिवारीले भने । अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा आएर एचडीयू, आईसीयू र भेन्टिलेटरसम्म लैजाँदा पनि बचाउन नसकेका संक्रमित धेरै रहेको उनले सुनाए । ‘मृत्यु हुनेमा कम उमेरका संक्रमित पनि धेरै नै हुनुहुन्छ,’ उनले थपे ।
रोकथामको प्रयास चित्तबुझ्दो छैन
राप्ती नगरपालिका–५ का २९ वर्षीय विजय थिङ भारत उडिसाको भुवनेश्वरमा इन्जिनियरिङ पढ्छन् । भारतमा संक्रमण बढ्न थालेपछि वैशाख ११ मा उनी घर आए । सिधै गएनन् । एक दिन होटलमा बसेर स्वाब दिए । १३ गते उनलाई संक्रमण नभएको बताइयो । तर घर गएको पर्सिपल्ट ज्वरो आयो । ज्वरो बढ्न थालेपछि उनले नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई फोन गरे ।
‘उहाँहरूको फोन उठेन । भण्डारा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई फोन गरे । उहाँले ज्वरो आएको भए सिटामोल खाएर साता दिन घरमै बस्नुस्, त्यसपछि पनि सन्चो नभए अस्पताल जानुहोला भन्नुभयो,’ विजयले भने । तर अवस्था सहज भएन । एम्बुलेन्स पनि नमिलेपछि आफैं मोटरसाइकल हाँकेर १५ गते फेरि चितवन मेडिकल कलेज आए । स्वाब दिए, एक्सरे र रगत परीक्षणका लागि छाडे । ‘भोलिपल्ट रिपोर्ट आउँछ भनेका थिए । म निकै आत्तिएँ । १६ गते दिउँसो ४ बजे अस्पताल गएर रिपोर्ट नआउँदै भर्ना भएँ । ८ बजे रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ आयो । स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह मानेर बसेको भए मेरो फोक्सो सिद्धिने थियो,’ विजयले भने ।
गत वर्षको जस्तो स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाएका छैनन् । तर पछिल्ला दिन अक्सिजन सिलिन्डरसहितको केही बेडको आइसोलेसन बनाउन सुरु गरेको दाबी भने गरेका छन् । ‘गत वर्षको जस्तो समुदाय तहमा क्वारेन्टाइन बनाउन सक्ने अवस्था देखिएन । तीव्र फैलने खालको भाइरस भएकाले संक्रमितलाई चाँडो अस्पतालसम्म पुर्‍याउने र सामान्य संक्रमितलाई अक्सिजन सिलिन्डरसहितको आइसोलेनमा राख्ने प्रबन्ध सबै स्थानीय तहले मिलाएका छन्,’ जिल्ला समन्वय समिति संयोजक कृष्णकुमार डल्लाकोटीले भने ।
उनले स्थानीय तहले संक्रमितलाई आवश्यक पर्दा अस्पताल जान तत्काल एम्बुलेन्स पाइने व्यवस्था मिलाएकोसमेत दाबी गरे । तर पार्वतीपुरका शिक्षक बटुकलाल तमाङले होम आइसोलेसनमा बसेका एक संक्रमितलाई अस्पताल लैजान दुई घण्टा खोज्दा पनि एम्बुलेन्स नपाएको र अस्पताल पुगेर पनि शय्या पाउन घण्टौं कुर्नुपरेको गुनासो गरे ।
चितवनमा होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमित अत्यधिक छन् । जिल्ला बाहिरबाट उपचारका लागि आउने संक्रमित पनि उत्तिकै छन् । जिल्लामा उपलब्ध पूर्वाधारले नपुग्ने भन्दा पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेर समस्या पर्ने हो कि भन्ने डर यहाँका अधिकारीहरूलाई छ । संक्रमितहरूको मृत्यु भयो भन्ने सुनेपछि अस्पताल आउने चाप झनै थपिन्छ ।
‘घरमा बस्दा केही बढी खतरा हुने पो हो कि भनेर धमाधम मान्छेहरू अस्पताल आउने गरे भने सामान्य अवस्थाका संक्रमितहरूको पनि भीड लाग्न थाल्छ । यसले गर्दा अस्पतालले हेर्नै पर्ने गम्भीर संक्रमितले सेवा नपाउने अवस्था आउन सक्छ,’ स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख तिवारीले भने । यसका लागि संक्रमित गम्भीर हो या हैन भन्ने छुट्याउन सक्ने संयन्त्र आवश्यक भएको उनले बताए । ‘सामान्य एक्सरे गरे पनि संक्रमितको अवस्था कति गम्भीर छ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ । ठूला अस्पतालहरूमा गम्भीर खालका बिरामी मात्र राख्न सक्ने हो र अस्पताल आउन खोज्ने अन्य संक्रमितलाई अरू अस्पतालमा राख्ने व्यवस्था गर्ने हो भने उपचारमा प्रभावकारी रूपमा लाग्न सकिन्छ,’ तिवारीले भने ।
जिल्लामा संक्रमितको उपचारका लागि तीन अस्पताल गरी करिब चार सय बेड छन् । भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा. अधिकारी ६ सयसम्म बेड पुर्‍याउन सके उत्तम हुने बताउँछन् । तर पाँच सय बेडभन्दा बढी बनाउँदा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनमा भने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : वैशाख २५, २०७८ ०७:४७
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेका बेला बोलाइयो बैठक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख सहभागी नहुने
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत फेरि संवैधानिक निकायमा आफूअनुकूल पदपूर्ति गर्न खोजेका छन्
वैशाख २५, २०७८ कृष्ण ज्ञवाली
प्रकाशित : वैशाख २५, २०७८ ०७:४३